बाबुरामले अर्को ढोल पिटे
बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल-
नयाँ मुसलमानले प्याज बढी खान्छ रे । बाबुराम पटक पटक काँचुली फेरिरहन्छन् र नयाँ नयाँ नारा घन्काइरहन्छन् । उनको नयाँ नारा हो– हामीलाई विश्वास गर्नोस्, हामी, ४० वर्षभित्र नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौँं ।
४० सूत्रीय माँग राखेर ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्ने बाबुरामले १७ हजारको जीवन सिध्याए । यस्तो किन ननेर एकजनाले प्रश्न गर्दा झोक्किएर बाबुरामले भनेका थिए– १७ हजार १ हुनुपर्ने रहेछ । बाबुराम अझै रक्तपिपासु ?
आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेका बाबुराम प्रचण्डबाट उछिट्टिएर नयाँशक्ति पार्टी खोले, चलाउन सकेनन् । कहिले विवेकशीलतिर मिल्न पुगेका थिए, अहिले उपेन्द्र यादवसँग घाँटी जोडेर समाजवादी पार्टीको पसल खोल्न पुगेका छन् । राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउन खप्पीस छन् बााबुरामहरु । यिनै बाबुरामले सिन्धुली पुगेर घोषणा गरेका छन्– यो पार्टीले लिएको सिद्धान्तबाटमात्र नेपालको सम्पन्नता सम्भव छ ।
संवैधानिक समितिमा बसेर संविधान निर्माण गरेका बाबुरामले संविधानमा सही गरेका छन् । अहिले उनी भन्दैछन्– संविधान त बनेको छ, यो अधुरो छ, अपुरो छ । संशोधन नगरेसम्म संविधान पूर्ण हुनसक्दैन, संविधान नै पूर्ण नभएपछि देश समृद्ध कसरी हुनसक्छ ।
क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न बाँकी छ, त्यही कार्यभारका लागि समाजवादी पार्टि जन्मेको हो । सत्य र न्यायका लागि लड्न सधैं तत्पर छु । अन्ततः यही शक्ति देशको प्रमुख शक्ति हुनेछ । जनताले यही पार्टीलाई पहिलो शक्तिका रुपमा देख्न चाहेका छन् ।
बाबुराम जनयुद्धबाट सिंहदरवार पनि उक्लिसकेका हुन् । देशको प्रधानमन्त्ती भइसकेका व्यक्तिले यसरी हलुका बोल्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री हुँदा उनले देशलाई के दिए ? आमयुवाले बाबुरामजस्तै नेताहरुबाट सिक्ने हो, के सिके होलान् ? मान्छे मारेर सत्तामा जाने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अनि सत्ताबाट खँगारिएपछि नयाँ नयाँँ ढोल पिटेर जनतलाई भ्रमित पार्ने ?
जनताले साथ दिए, समर्थन दिए, सहयोग दिए, रगत दिए, ज्यान दिए । जनताले दिनुपर्ने सबै दिए । अझै यिनै नेताका लागि पेट काटेर कर
दिइरहेका छन् । अझै जनतासँग माँग्ने ?
नेताहरुलाई किन लज्जाबोध हुन्न, जनता चुप लागेका छन् भन्दैमा तिनलाई अझै शोषण गर्ने ? अव त जनतालाई के देउ नेताजीहरु ?